एनआरएनएको यसरी गरिदैँछ विधान संशोधन ! | suryakhabar.com
Home प्रवास एनआरएनएको यसरी गरिदैँछ विधान संशोधन !
एनआरएनएको यसरी गरिदैँछ विधान संशोधन !
on: २७ आश्विन २०७५, शनिबार ११:३७ In: प्रवास, समाचारTags: No Comments
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए)मा छ उपाध्यक्ष रहने गरी विधान संशोधन हुने भएको छ ।
म्याग्दीमा हिमपहिरोमा परी ५ विदेशी र ४ नेपाली सहित ९ जना बेपत्ता
संस्कार समाज नेपालले नयाँ बसपार्कमा संस्कार सिकाउदैँ
२७ आश्विन २०७५, शनिबार ११:३७